पिडित श्रीमानको बयान : बिवाह गरेको ३ दिनमै श्रीमतीले…. – Hamro Nepali Samachar
Home/ समाचार/पिडित श्रीमानको बयान : बिवाह गरेको ३ दिनमै श्रीमतीले….
हेटौंडाको २७ वर्षीय एक पुरुष, जो तीन वर्षदेखि आफ्नै श्रीमतीबाट हिं’सा’को शि’का’र बन्दै आएका छन्। पुरुष प्रधान समाजमा महिला हिं’सा’को अनेकौं घटना सुन्ने गरिएकोमा पछिल्लो समय पुरुष हिं’सा’को घटना पनि हुन थालेका छन्।
त्यस्तै एक घटनाको शि’का’र बनेका हुन्–कृष्णप्रसाद (नाम परिवर्तित)। ०७५ साल फागुनमा मागी विवाह गरेका उनले गएको ३ वर्षमा श्रीमतीबाट मा’न’सि’क मात्रै नभएर शा’रि’रि’क हिं’ ‘सा पनि सहेका छन्।
विवाह भएको तेस्रो दिनबाट नै सुरु भएको उनीहरुबीचको म’नमु’टाव ३ वर्षसम्म एक अ’दृश्य हिं’सा’को रुपमा निरन्तर चल्दै आएको छ। विवाह गरेर सुन्दर वैवाहिक जीवनको सपना देखेका कृष्णप्रसादलाई विवाह भएको तेस्रो दिनमै श्रीमतीले आफूलाई डिभोर्स दिएर अर्को विवाह गर्न आग्रह गरेकी थिइन्।
तर एकपटक जोडिसकेको सम्बन्धलाई तो’ड्न हुदैन भन्ने सोचले आफूले डिभोर्स नदिएको कृष्ण बताउँछन््। अहिले उनीहरुको एक वर्षको छोरा पनि छ। हुर्किँदै गएको छोरासँगै उनीहरु दुईबीचको विवाद पनि दैनिक बढ्दै गएको छ।
यही विषयमा वि’वा’द हुँदा कृष्णलाई उनको श्रीमतीले इँ’टा’ले प्र’हा’र गरेकी थिइन्। श्रीमतीले प्र’हा’र गरेको इँ’टाले उनको टाउकोमा ग’म्भी’र चो’ट ला’ग्यो। इँटाले श्रीमानलाई प्र’हा’र गरेर उनी आफू ढो’का ल’गाएर भित्र सुतिन्। कृष्ण भने एक्लै भोको पेट घर बाहिरको बेञ्चमा सुते। यो सिलसिला एक हप्तासम्म चल्यो।
कृष्णले एकहप्तासम्म खान पाएनन्। नि’म्नव’र्गीय भएकाले उनले दैनिक बाहिर किनेर खान पनि सकेनन्। कहिलेकाही उनलाई साथीहरुले खुवाए त कहिले उनी भोकै बसे।